God laga helay meydadka 13 Muwaadiniin Turkish ah oo afduub loo heystay | Allbanaadir.com
Home NEWS God laga helay meydadka 13 Muwaadiniin Turkish ah oo afduub loo heystay
God laga helay meydadka 13 Muwaadiniin Turkish ah oo afduub loo heystay
Sida uu sheegay wasiirka difaaca Hulusi Akar, Ciidamada Turkiga ee fulinaya howlgalka ka dhanka ah mintidiinta kooxda PKK ee waqooyiga Ciraaq ayaa god ka helay meydadka 13 Turkish ah oo u afduubnaa kooxda.
Turkiga ayaa hawlgal millatari oo ka dhan ah PKK ka bilaabay gobolka Gara ee waqooyiga Ciraaq 10-kii bishan Febraayo si uu u ilaaliyo xuduuddiisa, isla markaana u soo badbaadiyo muwaadiniin hore loo afduubay, ayuu yiri wasiirku. Aqoonsiga meydadka laga helay godka ayaan wali caddeyn.
Dhankoodana, bayaan lagu soo daabacay barta internetka ee PKK ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah maxaabiistii ay gacanta ku hayeen oo ay ku jireen sirdoonka Turkiga, booliska iyo militariga ay ku dhinteen iska horimaad ka dhacay aagaasi.
Previous articleWaa Maxay Maalinta Jacaylka (Valentine’s Day) Mase banaan tahay diin ahaan..?!
Next articleSababta keentay in muddo kooban la xiro Jidka dabka & Wararkii u dambeeyay Kiiska Badda